चीन विरूद्धको ‘हाइब्रिड वार’ लड्न डब्लुएचओमा भारतले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पठाउन खोजेको हो र ? - Jhilko
चीन विरूद्धको ‘हाइब्रिड वार’ लड्न डब्लुएचओमा भारतले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पठाउन खोजेको हो र ?
काठमाडौ । भारतका स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष बद्र्धनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको कार्यकारी बोर्ड अध्यक्षमा मनोनित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
योजना अनुसार सब ठीक ठाक भए हर्षबद्र्धनले शुक्रबारदेखि सो पद बहाल गर्ने छन् ।
भारतको तर्फबाट डब्लुएचओको जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बद्र्धनले पूरा गर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
यसका लागि हुने निर्वाचन प्रक्रियाको औपचारिकता २२ मेमा पूरा गरिने छ । यो भूमिका पूर्णकालीन जिम्मेवारी नभइ वर्षमा दुई पटक हुने बोर्डको बैठकमा अध्यक्षता गर्नु हुनेछ ।
डब्लुएचओको दक्षिण पूर्व एसिया समूहले गतवर्ष सर्वसम्मतले यो जिम्मेवारी भारतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो कार्यकारी बोर्डको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । अध्यक्षको पद चक्रीय प्रणाली अनुरूप क्षेत्रीय सदस्यहरूमा घुमिरहेको हुन्छ ।
अमेरिकाले भारतलाई चीन विरूद्धको छद्यम युद्धमा उपयोग गर्न खोजेको छ । चीन विरूद्धको गतिविधि कोरोनाभाइरसको अभियान अन्तर्गत भारतले सहजै गर्न सकोस भन्ने मनसायका लागि स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष बद्र्धनलाई पठाउन खोजिएको कतिपयको अड्कल रहेको छ ।
अमेरिका मस्को आधारित एक राजनीति विश्लेषक एन्डरू कोरिब्कोले यस्तो बताएका छन् । चीन विरूद्धको ‘हाइब्रिड’ युद्ध भारतले लड्न लागेको उनको भनाइरहेको छ । उनले भारत अमेरिकाको भइसकेको दाबी ‘ इन्डिया इज इन्टेन्सिफाइङ इट्स युएस ब्याक्ड हाइब्रिड वार अन चाइना’ शीर्षकमा गरेका छन् ।
डब्लुएचओका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अमेरिका समर्थित मागलाई भारतले समर्थन जनाइरहेको देखिएको बताउँदै विश्लेषक कोरिब्कोले डब्लुएचओमा ताइवानको भूमिका खोज्न यो पटक अमेरिकाले भारतलाई उपयोग गर्ने जनाएका छन् ।
एक चीन नीतिको विषयमा भारत ढुलमुले हुन सक्ने देखेर अमेरिकाले डब्लुएचओको मोर्चाबाट चीन विरूद्ध भारतको उपयोग गर्न खोजेको उनको बुझाइ रहेको छ ।
कोरोनाभाइरस कोभिड–१९को विषयमा चीन विरूद्धका दाबीहरूलाई उछाल्न भारत बढी उपयोगी हुन सक्ने देखेर अमेरिकाले त्यस अनुरूपको योजना बनाइरहेको देखिएको छ । गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खुरूक्क देउ भनेपछि भारतले दिएको दिएको दृश्य देखिएको थियो ।
अमेरिका भारत वर्चस्वले चीनलाई गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न गर्ने छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सैनिक शक्तिका भोका हुन् भन्दै कोरिब्कोले जम्मुकाश्मिरलाई दिइएको विशेष दर्जाको अपहरण, लद्दाखको विभाजन, डोक्लाममा सैनिक भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्ने कार्य त्यसको पुष्टि गरेको जनाएका छन् ।
भारतका स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बद्र्धनबाट चीन विरूद्धको छद्यम युद्धमा भारतको भूमिका प्रभावकारी हुने देखिएपछि भारत सरकारले उनलाई पठाउन खोजिएको कतिपयको आँकलन रहेको छ । कोरोनाभाइरस विरूद्धको अभियानको नेतृत्व अहिले हर्ष बद्र्धनको क्षमतालाई विशेष आँकलन गरिएको हो ।
भारतले चीनबाट निस्कन खोजेका क्रियाशील अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भित्र्याउने योजना अनुसार हाइब्रिड वारमा सहभागीता जनाउने भएको हो ।
भूमिअधिग्रहण खोजेको भन्दै प्यालेस्टाइनद्वारा इजरायल र अमेरिकासँग भएका सबै सम्झौता...
प्रधानमन्त्री ओलीको आज पनि मिर्गौला डायलासिस गरिने, केही...
ती डाक्टरले प्रधानमन्त्रीको रगतमा हानिकारिक क्रेटिनाइनको मात्रा बढी देखिएकाले थप...
झ्याप्प झ्याप्प बत्ति निभ्नु समाधान खोज्दै कुलमान
माग बढ्दा केही स्थानमा स्वभाविकरूपमा ‘लोड’ बढेको र ‘लोड’ व्यवस्थापनमा केही समस्या...
सीमामा सशस्त्र प्रहरीसँगै स्थानीय जनता
सीमामा सशस्त्र प्रहरी र जनताको संयुक्त पहरेदारीले कोरोना रोकथाम तथा सीमाबाट हुने...